Maitiro ekuisa nyowani LibreOffice icon madingindira? | Linux Vakapindwa muropa
Muzhinji, LibreOffice's interface haina kuchinja zvakanyanya munhoroondo yayo. Asi ipapo chinhu chinoshamisa chekuona icho chachinja mune yazvino vhezheni yesutu uye ndiko kushandiswa kwemifananidzo mitsva yeUI.
Kwete izvozvo chete, kubvira chaizvo mushandisi anokwanisa kuchinjisa pakati peSifr, Oxygen, iwo echinyakare mifananidzo, iyo mitsva mifananidzo, Tango, pakati pevamwe.
Asi zvino zvakadiniko kana vachida kushandisa imwe seti yemifananidzo isiri pakati pesarudzo? Izvi zvinogoneka here?
Kunyangwe zvisiri zvakajairwa kuchinja iyo LibreOffice icon yakatarwa, iwe unofanirwa kuziva kuti kune mapakeji eaya pane network.
0.1 Ungachinja sei maoffice eOffice?
1 Ungawana sei madingindira matsva?
Ungachinja sei maoffice eOffice?
Kutanga, iwe unofanirwa kuziva kuti aya ma icon anochinja mune suite, Izvo zvinogona kuitwa kubva kunotevera nzira "Zvishandiso> Sarudzo> Tarisa".
Pano, unogona kusarudza icon theme kubva pakudonhedza pasi runyorwa, pamwe nekukwanisa kushandura saizi yekoni uye nekumwe kugadziridzwa kunoonekwa.
Shanduko hadzidi chirongwa kutangazve. Sezvo paine dzimwe sarudzo dzakanaka kwazvo pano, kusanganisira mifananidzo yemonochrome.
Zvimwe zveizvi zvichave zviripo nekutadza, uye zvimwe kuburikidza nezvakachengetwa zvekuwanda kweLinux.
Kana iwe uchida kushandisa zvachose tsika uye zvisina kujairika mifananidzo, unofanira kutanga watsvaga zvishoma kutenderera pawebhu, kuti uwane iwo aunoda.
Kunyangwe pasina zvakawanda zvingasarudzwa, kana sarudzo dzinoenderana neshanduro dzazvino dzeLibreOffice.
Imwe yemapakeji atinogona kuwana pawebhu iSif, iyo inowanikwawo kuburikidza nezvakachengetedzwa.
Imwe pasuru inozivikanwa kwazvo ndiPapirus, iyo iwe yaunogona zvakare kuwana mukati mezvitoro zvekuparadzirwa kwako kweLinux.
Ungawana sei madingindira matsva?
Izvo zvakakosha kutaura kuti iwo madingindira ezvidhori iwe aunowana pane mambure anouya muZIP mafaera uye chaiyo LibreOffice extensions (oxt mafaera). Saka zvakajairika, zviri nyore kuisa ndeavo anouya mu zip faira.
Sezvo zvinowedzera dzimwe nguva zvinopesana neiyo LibreOffice vhezheni.
Kana iwe ukawana musoro wenyaya mune oxt, unogona kuiisa kuburikidza neiyo LibreOffice interface. Saka ingotinya pane wedzera, sarudza iyo yakadzoserwa yekuwedzera.
Mushure meizvozvo isu tinofanirwa kutangazve chirongwa ichi. Kana izvi zvaitwa isu tichaenda ku "Zvishandiso> Sarudzo uyezve Tarisa" uye pano tichaenda kuchinjisa kumusoro wenyaya uchangobva kutorwa.
Mune fomati yeZIP
Sezvandambotaura nguva pfupi yadarika, iwo mapakeji emifananidzo aunowana mune yefaira faira reZIP tichaiisa nemaoko. Saka chinhu chekutanga kuita kusunungura pasuru yacho.
Uye mushure meizvozvo ivo vanongoda kuteedzera mafaera ku:
Yako LibreOffice kuisirwa inogona zvakare kuwanikwa pane isiri-standard nzira uye / kana kushandisa mamwe madhairekitori kurodha ako marongero, mune iyo mamiriro apo iwe unozofanirwa kuteedzera mafaera ipapo kana, kuti uchengetedze zvinhu zvakarongedzwa, gadzira zvinofananidzira zvinongedzo.
Izvi ndozvinoitwa nePapirus icon theme script, kutora semuenzaniso, ine imwezve nzvimbo yemisoro:
Mushure meizvozvo vanodzokera kunzira iri muLibreOffice sarudzo yemenu kuti vachinje mifananidzo.
LibreOffice icons hachisi chimwe chinhu chaunoshandisa nguva yakawanda uchifunga kana kutarisa, asi paLinux, paunenge uine rusununguko rwakawanda kusarudza zvidhori zvemifananidzo yedesktop, kuve neyakajairika seti kune ese maapplication anogara achigutsa.
LibreOffice ine dzakasiyana mushe, asi zvinogona kunge zviri zvekuiwedzera neyechitatu-bato icon mifananidzo.
Asi zvichiri zvakanaka kuti uone izvozvo LibreOffice ine modular hunhu, Uye izvo zvinoreva kuti pane zvakawanda zvingangovanzwa mune yayo inoita senge inomira uye imwe yechinyakare interface. Zvisinei, ndinovimba unofarira izvi.
Kana ari mawebhusaiti iwe aunogona kuwana icon theme, pane akati wandei, nekuti mune vechitatu mapato unogona kuzviwana paGitHub, DeviantArt nevamwe vazhinji. Asi imwe nzvimbo yepakati ndiyo LibreOffice yekuwedzera peji.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Maitiro ekuisa nyowani LibreOffice icon madingindira?